Matatu Matatu Ekushandisa Zvemukati Zvako | Martech Zone
Chitatu, Kukadzi 25, 2009 Svondo, May 29, 2016 Douglas Karr
Vazhinji vatengesi vanoshandisa chidimbu chimwe chetekinoroji chavanofarira kana kugadzikana nacho uye vanofuratira vamwe. Ini ndiri mutsigiri mukuru wekushandisa otomatiki uye mushambadzi achishandisa mameseji avo chero nzira, chimiro, kana fomu - zvakanyanya sezvo zvisingambokuvadze kushambadzira kwavo.
Nezve iyo kambani inovhenekera zvemukati kuburikidza neayo saiti, zvinyorwa, zvichena, nyaya dzenyaya kana bhurogu yayo yemubatanidzwa, ndinotenda kune matatu makiyi ekuti zvemukati zvako zvishande chaizvo kukambani yako kana brand:
Ramba Wakakodzera - ramba wakanangana uye, kunyangwe ukaedzwa sei, edza kuona kuti unogara uchitaura nevatengi vako kana tarisiro. Izvi zvinokuwanira iwe chiremera uye mukurumbira mukurumbira nekukurumidza zvakanyanya kupfuura kana iwe uchisvetuka-svetuka kana kusiyana nemeseji yako
Gara Uchizivisa - kune tarisiro nevatengi kunze uko vanoda zvemukati, asi vasingazive kuti zviripo. Endesa zvinyorwa kune mamwe masevhisi, kuburitswa kwenhau, isa zvinongedzo mumadhairekitori, wedzera kune hurukuro mumaforamu akakodzera, kusimudzira zvinyorwa zvako kuburikidza nemagariro ekubhukimani maturusi, tumira kunzvimbo dzenhau, wikis, nezvimwe. Iva muenzi blogger uye utaure pane mamwe mablog ane ma link kumashure kune zvako zvemukati. Wedzera zvinongedzo kumavovovhoisi, ako masiginecha emaimeri, makadhi ako ebhizinesi… kwese kwese!
Sangano Kwese - ingangoita ese media media application ine maficha ekuburitsa yako RSS feed kune yavo sevhisi. Shandisa yega yega! Vanhu vazhinji vanoshandisa imwechete network uye havazombotsauka, ita shuwa kuti zvemukati ndimo mavanoda kuzviwana! Shambadzira kune Twitter, Zvakare!
Iwe waisa mukushanda nesimba uye wakanyora yakawanda yakakosha yezvinyorwa. Zvino shanda kuti uone kuti zvemukati zvinowana kutarisirwa kwazvinofanirwa!
Tags: zvemukati syndicationzivisazivisa zvirimokukoshazvine chekuita nezviri mukatigara wakakodzeraSyndication
Kukadzi 25, 2009 na8:26 PM
Bara rako repamusoro: Kukoshera ndiko kwakakosha
Chimwe chinhu chakakoshawo kuroverera pasi zano. Semuenzaniso isu pachedu zano ndeiyi:
-ita nevashambadzi vesocial media vanokurukura zano, chinzvimbo, kukosha uye pesvedzero
- verenga zvese zvakaburitswa nevakanyanya kukurudzira (Brogan, Owyang…)
- pinda pakati pemashiripiti (vanhu vane simba guru uye vane ruzivo rwakanyanya pamusoro pechinyorwa).
Ndatsanangura maitiro edu mune zvimwe zvakawanda pano: http://blog.ecairn.com/2009/02/18/fighting-social-media-fear/
Chero mhinduro inogamuchirwa neushamwari.